Sagal Radio Services • News Report • May 17, 2017
Faah Faahin: Ciidamo Itoobiyaan Ah Oo Qarax Lagula Eegtay B/weyne
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax gelinkii hore ee maanta ciidamo ka tirsan Itoobiya lagula eegtay duleedka magaalada Baladweyne.
Yuusuf Dabageed “Xil ka qaadista la igu sameeyay waxaa is leeyahay armey deg deg ku jirtay”
Yuusuf Axmed Xagar (Dabageed) ayaa ka hadlay xil ka qaadistii uu shalay ku sameeyay Madaxweynaha Hirshabeelle, isagoo sheegay in aan lagu soo wargelin, isla markaana uu ka maqlay warbaahinta.
Baaritaano Ciidamada dowlada ka sameeyeen Beledweyne, kadib qarixii shalay
Ciidamada dowlada Jabuuti ee qeybta ka ah AMISOM iyo ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa saaka baaritaano ka wada xaafadaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Magaalada Beledweyn oo ka socda dhismaha Maamul la magac baxay Hiiraan State
Siyaasiyiin ka soo jeeda Gobolka Hiiraan ayaa sheegay inuu meel wanaagsan marayo qorshe lagu dhisayo maamul la magac baxay Hiiraan State, kaasoo ka madax banaan maamulka uu dhismihiisa ka socdo magaalada Jowhar.
Madaafiic lagu weeraray Saldhig Ciidamada Jabuuti ku leeyihiin duleedka Beledweyn
Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyn ayaa sheegaya in xalay laga maqlay madaafiic hoobiyeyaal ah oo ku soo dhacay qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada.
SAFIIRKA JABUUTI: Shacabka ku nool degmada Beledweyne Marxalad Adag ayay ku sugan yihiin
Danjiraha Jabuuti u jooga Somalia Dayib Dubad Rooble oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladda Jabuuti si dhaw ula socto xaalada adag oo ay wajahayaan shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne.
Xabad joojin la kala dhex dhigay maleeshiyadii ku dagaalamay Beledweyn
Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyn ayaa sheegaya in xabad joojin la kala dhex dhigay maleeshiyo beeleedyadii maalmahan ku dagaalamayay galbeedka magaalada.
Xukuumadda Soomaaliya oo wafdi u direysa dagaalka Beledweyn
Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in wafdi ballaaran u dirto magaalada Beledweyn, si ay uga qeyb qaataan dadaalada lagu xalinayo colaada faraha ka sii baxeysa ee u dhaxeya labo beelood oo wada dega galbeedka magaalada.
Maydka Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif oo loo qaaday Deegaanka Halgan (SAWIRRO)
Maydka ALLAHA u Naxariisteen Ugaas C/raxmaan Ugaas Kaliif Ugaas Rooble ayaa subaxnimadii hore ee saakay loo qaaday Daaro-Ugaas oo aan wax badan ka fogeyn deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, halkaa oo ay ku aasan yihiin 17 Ugaas oo uu ugu danbeeyay alle ha u naxariisteen Ugaas Khaliif Ugaas Rooble.
Madaxweynaha oo kulamo la-tashiyo ah ka wada magaaladda Beledweyn (Sawirro)
Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo caawa habeenkii labaad ku hoyanaya magaaladda Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiran ayaa kulamo la-tashiyo ah la qaadanaya odayaasha dhaqanka beelaha dega Gobolka, Siyasiyiinta iyo ururada bulshadda rayidka ah.
Xaaladda Baledweyne oo Maanta degan iyo Ciidamo AMISOM ah oo la geeyay Xaafadda Howlwadaag
Sagal Radio Services • News Report/Opinion • December 16, 2015
Ciidamada Milatariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan Magaalada Baledweyne ayaa maanta waxaa la kala dhex dhigay Maleeshiyaadka Saddexdii Maalin ee la soo dhaafay ku Dagaalamayay Xaafadda Hwolwadaa ee Galbeedka Magaalada.
Saddex askari oo lagu diley magaalada Beledweyne
Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in rag bastoolado ku hubeysan ay ku dileen saddex askari xaafada Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Xiisad ka jirta magaalada Beledweyne maalintii labaad iyo wafdi ka socda dowlada oo goor dhow gaaraya
Waxaa maalintii labaad xiran inta badan ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka magaalada Beledweyne kadib markii maleeshiyo beeleed ka careysan dilka sarkaal u shaqeynayay Qaramada Midoobay ay xirteen wadooyinka magaalada.
Xiisad ka jirta magaalada Beledweyne kadib markii lagu diley sarkaal ka tirsan hay’ada Mine Action
Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in xiisad colaadeed ay ka taagan tahay magaalada Beledweyne kadib markii shalay ciidamada amniga magaalada Beledweyne ay dileen sarkaal u shaqeynayay hay’ada Mine Action ee gobolka Hiiraan.
Al-Shabaab oo xalay weerar ku qaaday Xabsiga magaalada Beledweyn
Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyn ayaa sheegaya in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab xalay weerar ku qaadeen xabsiga magaalada Beledweyn.
Kooxo Hubeysan oo xalay ku dilay Beledweyn nin Nabadoon ahaa iyo wiil uu adeer u ahaa
Kooxo hubeysan ayaa xalay xaafada Howl-wadaag ee magaalada Beledweyn ku dilay Nabadoon caan ka ahaa magaalada, kaasoo lagu magacaabi jiray Axmed Siyaar Aadan, iyadoo sidoo kale dhaawacay wiil uu dhalay iyo xaaskiisa.
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo goor dhow gaaray magaalada Beledweyn
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa goor dhow gaaray magaalada Beledweyn ee Gobolka Hiiraan.
Rag hubeysan oo gacansade iyo ruux ilaalo u ahaa ku dillay magaalada Beledweyne
Sagal Radio Services • News Report • February 17, 2015
Subaxnimadii hore ee saakay ayeey rag hubeysan ku toogteen xaafadda Howl-wadaag ee magaalada Beledweyne Xaaji Cumar Max'ud Nuur (Xaaji Quuroow) oo ka mid ahaa ganacsatada ugu waaweyn gobolka Hiiraan iyo qof ilaalidiisa ka mid ahaa.
Wararkii ugu danbeeyay Banaan Bax Loga Soo Horjedo Ciidamada Amisom oo Ka Dhacay Baladweyne
Dad farabadan oo dagan Magaalada Baladweyne ayaa isku soo baxay Wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaa ayna dibad baxaan kaga soo horjeedeyn ciidamada Amisom ee nabad ilaalinta u jooga somaliya
Beledweyne oo laga xusay 37-sano guuradii aas-aaska ciidanka dalka Jabuuti
Munaasabad lagu qabtay xarunta taliska ciidamada Jabuuti ee deegaannka Ceel-Jaalle duleedka Beledweyne, islamarkaana lagu maamuusayay 37-sano guuradii ka soo wareegtay aas-aaskii ciidamada militariga dalka Jabuuti, ayaa waxaa ka qeyb-gallay mas’uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan, saraakiisha ciidanka dowladda, kuwa midowgga Africa AMISOM iyo marti-sharaf kale.
Booliska Baladweyne oo sheegay inay isku soo dhiibeen rag Shabaab ka soo goostay
Ciidamada booliska degmada Baladweyne, ayaa maanta saldhigga degmada ku soo bandhigay 7 ruux oo dhalin yaro ah, kuwaas oo ay sheegeen ciidamada boolisku iney ka tirsanaayeen al-Shabaab, islamarkaasina ay si iskooda ah isugu soo dhiibeen ciidanka dowladda.
AMISOM oo cambaareysay weerar madaafiic ah oo Balad-weyne dhawaan lagu qaaday
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM loo soo gaabiyo, ayaa cambaareeyay weerar madaafiic ah oo arroortii Jimcaha ay kooxda Shabaabku ku qaadeen degmada Baladweyne ee xarrunta gobolka Hiiraan.
Wasiirka gaashaandhigga Jabuuti oo Balad-weyne booqday
News Report • December 2, 2012
Wafdi uu hoggaaminaayo wasiirka gaashaandhigga dalka Jabuuti, ayaa maanta gaaray magaalada Balad-weyne ee xarrunta gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ka howl galaan ciidamo ka socda dalka Jabuuti oo ku shaqeeyaa magaca ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM.
Rayid Baladweyne lagu dilay maanta
Kooxo baastoolado ku hubeysan, ayaa barqadii maanta ku diley magaalada Baladweyne ee xarrunta gobolka Hiiraan qof rayid ah oo ka adeeganayay suuqa Heliwaa ee xaafadda Howl-wadaag.
AMISOM oo buuxisay meelo ay Itoobiyaan banneeyeen
Ciidamada AMISOM ee Hiiraan jooga, ayaa maanta la wareegay fariisimo ay banneeyeen ciidamadii Itoobiya ee Baladweyne joogay tan iyo markii ay halkaasi ka saareen kooxdii al-Shabaab.
Hiiraan oo si diirran looga soo dhaweeyay xukuumadda cusub
Bannaanbax weyn oo lagu taageeraayo xukuumadda cusub ee kooban, ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarrunta gobolka Hiiraan.